Dhageyso: Ra’iisul Wasaare Kheyre; oo sheegay in Safarkiisi Kismaayo uu ku soo dhamaaday guul iyo Miro dhal – Walaal24 Newss
Dhageyso: Ra’iisul Wasaare Kheyre; oo sheegay in Safarkiisi Kismaayo uu ku soo dhamaaday guul iyo Miro dhal
March 15, 2019	2	By walaal24
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa sheegay in Safarkiisi Kismaayo uu ku soo dhamaaday guul iyo Miro dhal ku salaysan isfaham iyo in si dhab ah Dowladda Federaalka iyo Jubbaland u xoojiyaan wada shaqaynta loogu adeegayo Bulshadda Soomaaliyeed.
kadib Xaflad sagootin ah oo Xalay Kismaayo loogu sameeyey Ra’iisul wasaare Kheyre, ayuu ugu horreyn kaga mahad celiyay sidii ay maamulka iyo Shacabka reer Jubbaland ugu soo dhoweeyeen Magaalada Kismaayo.
Wuxuu sheegay in uu kulammo kala duwan la qatay, Madaxda ugu sarreysa Jubbaland, Labada Gole ee maamulka, saraakiisha Ciidamada, Duubabka dhaqanka, Dhallinyarada, Haweenka iyo guud ahaan qeybaha kal duwan ee Bulshada.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, ayaa caddeeyay in la dhammeeyay kala aragti duwanaashihii ku kala dhex jiray Dowladda Federaalka iyo maamulka Jubbaland, is qabashaduna ay qeyb ka tahay Dowladnimada, taas oo u baahan in wax laysla saxo.
Wuxuu sheegay in ay muuqato rajo ah in ay kor u socoto fahamka Soomaalinimada, isla xisaabtanka iyo in lays maqlona ay adkaynayso Dowladnimada, si ay taasi u xoogeysatana loo baahan yahay in la adkeeyo Xarigga isku haya Bulshada.
Ra’iisul wasaare Kheyre, ayaa sheegay in dhammaan qeybihii kala duwanaa ee uu la kulmay ay dhammaantood qabaan dareen ah halka ay Soomaaliya ku socoto muddada dhow, wuxuuna ugu baaqay in ay Dowladda ka go’an tahay ilaalinta midnimada Soomaaliya oo ay taasi tahay muqaddas.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan, ayaa isna sheegay in la dhameeyey tabashooyinkii iyo madmadowgii ka dhex jiray Dowladda Federalka Soomaaliya iyo Jubbaland Isla markaana uu guul ku dhamadeen wada hadaladii Ra’iisul Wasaare khayre uu la yeeshay Madaxda Jubbaland.
Halkan hoose ka dhageyso Ra’iisul wasaare Kheyre:-
Dhageyso: Madaxweynaha Jubaland oo sheegay in ay guulaysteen wadahadaladii uu la yeeshay Ra’iisul-Wasaaraha
Madaxweyne Trump oo ku dhawaaqay adeegsiga codka diidmada qayaxan ee Derbiga Mexico
Wasiirka Warfaafinta XFS oo Faah-faahin ka bixiyey Qaraxii ka dhacay Xarunta Dawladda Hoose
Guddoomiyaha Aqalka sare oo kulan la qaatay u qeybsanaha xoghayaha QM u qaabilsan dhinaca dembiyada jinsiga
Dowladda Federaalka oo cambaareysay isku daygii Afgambi ee ka dhacay Gobolka Amxaarada Itoobiya
Dhageyso: R.W. kuxigenka Khadar “mar ale markey suurtagal tahay walalaheyna Soomaliland ee Hargeysa iyo Muuse Biixi ay ufuranyihiin in Madaxweyne Farmaajo uu ka dego Hargeysa”
Dhageyso: Dagaal u dhaxeeyay Ciidmada Dowlada iyo Al-shabaab oo ka dhacay degmada Qoryooley
Dhageyso: Qeybta Labaad Maxaabiis laga soo daayay Xabsiyada Liibiya oo Muqdisho soo gaaray
Dhageyso: Maamulka Jubaland oo jawaab ka bixiyay go’aanadii ka soo baxay Gudiga Aqalka Sare
Dhagayso: Xidlhibaano sheegay in ay xilka ka qaadis ku sameyeen Gudoomiyaha Baaralamaanka Galmduug
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo kulan la qaatay Guddiyada DP World iyo agaasinka goobaha cashuuraha ka caaggan (Free zone)
Daawo: Dhacdo naxdin leh oo Xalay ka dhacday duleedka magaalada Hargeysa
Daawo: Gaas “Wiil ka yimid Xudur, Diinsoor iyo Buur hakaba oo kaba Dacas qaba inuu iiyimaado igu xukuma Dalkaygii suurtagal ma’aha”
Daawo: Madaxweyne Dani oo uga digay dhalinyarada Puntland in la kiciyo ku adaneyd boqashadii Ra’uul wasare khayre ee Gaalkacayo
Daawo: Madaxweyne Farmajo “Waxaa la idiin tababaray in aad ka mid noqotaan Ciidanka Asluubta, waxaa idin ku waajib ah, in aad hawlgallada xoreynta dalka ka qeyb qadatan”